People – Page2– NOe
” မည်သူမပြု မိမိမှု “လို့ဆိုသော်ငြားလည်း
မရှုမလှ ဆုံးရှုံးလိုက် ရတဲ့
အမှန်တရားခါးခါးတွေ (တကယ်) ရှိတယ်ဗျ။
ကျုပ်တို့ခမျာလည်း အတိတ်ကိုပဲ ရှူံးမဲ မဲလိုက်ကြရတယ်။
ပေါက္ခရဝဿ မိုး မှ မဟုတ်လေတော့
အထပ်ထပ် အဖန်ဖန် သတိပေးနေလေရဲ့။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့်ရှိတဲ့ အနာဂတ် အတွက်
“ယောကျာ်းများ မီးနေခန်းမဝင်ရ ၊ ထမီတန်းအောက်မသွားရ”
ယောကျာ်းတွေ မီးနေခန်းဝင်ရင် ဘုန်းနိမ့်တယ်။တို့
ထမီတန်းအောက်သွားရင် ဘုန်းနိမ့်တယ်။တို့ ဆိုတာ
“ယောကျာ်းတွေ” ကို နှိမ်ခဲ့တာဗျာ။
အဲဒီစကားတွေက ယောကျာ်းတွေကို နှိမ်ထားတာ။
ဘယ်သူတွေက နှိမ်တာလဲ ? ဆိုရင် မိန်းမတွေက နှိမ်ထားတာ။
အဲဒါ မိန်းမတွေက ယောကျာ်းတွေကို တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ နှိမ်ခဲ့တာဗျာ။
ဘယ်လိုနှိမ်တာလဲ? ဆိုတော့ ဒီလိုရှိတယ်။
ရှေးခေတ်က အခုလို ဆေးရုံ ၊ ဆေးခန်းတွေမရှိတော့ ကိုယ့်အိမ်ကအခန်းကိုပဲ ရေနွေးပူတွေလောင်း ၊ တံခါးတွေအလုံပိတ်ပြီး တတ်နိုင်သလို မသန့်သန့်အောင် လုပ်ခဲ့ကြရတာ။
အဲလောက် သန့်အောင် ထားတဲ့ အခန်းကို လယ်ထွန် ၊ တောခုတ် ၊ ငါးရှာ ၊ ဖားရိုက် ၊ လှည်းမောင်း ၊သိုင်းကျင့် စတာတွေကြောင့် ချွေးတစီစီ ဖုန်တလုံးလုံးနဲ့ ညစ်တီးညစ်ပတ် ယောကျာ်းရင့်မာကြီးတွေကို ရာရာစစဝင်ခွင့်ပေးစရာလား။
အားလုံး ညစ်ပတ်ကုန်ပြီး သွေးနုသားနုမီးနေသည်ရော နီတာရဲကလေးလေးပါ ရောဂါတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့လို့။
အဆင်လှလှ ၊ အရောင်လွင်လွင်လေးတွေကို သန့်သန့်ပြန့်ပြန့်ဝတ်ချင်လို့ အပင်ပမ်းခံလျှော်ထားပါတယ်ဆိုမှ ဒင်းတို့ ညစ်ပတ်တုံးကြီး ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေ လက်ညစ်ပတ်ကြီးတွေနဲ့ထိကုန်ရင် အကုန်ပြန်လျှော်နေရမှာ။
အဲဒါကြောင့် ရှေးခေတ်က မိန်းမတွေက သဲကိုးဖျာသော မာယာတွေနဲ့ လှည့်စားပြီး သူတို့တွေရဲ့ အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ “အလကားနေ ဘုန်းကြီးချင်နေတဲ့” ပျော့ကွက်ကို အကောင်းဆုံး အညှာကိုင်ပြီး ဝေးဝေးနေခိုင်းခဲ့ကြတာ။
“နင်တို့ကညစ်ပတ်တုံးတွေ မို့ဝေးဝေးနေ” ဆိုပေါ်တင်တွေနှိမ်တယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဘုန်းနိမ့်မယ် ဆိုပြီး တစ်ဖက်လှည့်နဲ့နှိမ်ထားခဲ့ကြတာ။
ဒါပေမယ့် လောလောဆယ်တော့ သူတို့အတတ်က ဒီဖက်ခေတ် မိန်းမတွေကို လာစူးနေတော့တာပဲ။
ဒါ့ကြောင့် အခုခေတ်ကတော့ ယောကျာ်းတွေက တော်တော်လေးသန့်လာကြပြီဆိုတော့ မီးနေခန်းပဲ ဝင်ဝင် ၊ ထမီတန်းအောက်ပဲသွားသွား သိပ်ပြဿနာမရှိတော့တာမို့ မိန်းမတွေအနေနဲ့အရင်ကလောက် အဖြစ်မသည်းကြပါနဲ့တော့နော်။
လူတွေဟာ ကမ္ဘာဦးမှာ ကိုယ်တုံးလုံးနေခဲ့ကြရာကနေဘာလို့အဝတ်အစားတွေဝတ်လာခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါ
“ရာသီဥတု ဒါဏ်ခံနိုင်ဖို့”လို့ ကောက်ချက်ချမိတဲ့ နောက်ပိုင်း
အဝတ်အစားကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ လောဘနည်းလာတယ်။ ဒေါသရှားလာတယ်။
ဒီလိုပဲ အစာစားခြင်းဟာ ရသာတဏှာအတွက်မဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် သက်သက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကို အသိချည်းမဟုတ်ဘဲ နှလုံးသားနဲ့ လက်ခံနိုင်တဲ့နေ့ကစပြီး ကိုယ်ဟာ အစားနည်းလာလိမ့်မယ်။
အစားတစ်လုတ်အတွက် ပေးရတဲ့ အချိန်တွေနည်းသွားမယ်။
ထမင်းတစ်နပ်အကြောင်းပြုပြီး လောဘဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းတရားတွေ ရှားလာလိမ့်မယ်။
စားချင်တာမစားရတဲ့ အခါ ဒေါသထွက်တတ်တဲ့ အကျင့်ပျောက်သွားမယ်။
လောလောဆယ်ထိတော့ ဗိုက်ဆာလို့ စားတာထက် ရသာတဏှာအတွက် စားတာက များနေသေးတယ်။
စားချင်တယ် ဆိုတာထက် စားသင့်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းနဲ့ပဲ အစာစား နိုင်ဖို့ သတိထားရမယ်။
အသက် ၂၅ နှစ်ကျော်လာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ “မလိုအပ်”တာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး စွန့်ပြီး “လိုအပ်”တာတွေကို ရှေးရှုဖို့ကြိုးစားချင်လာတယ်။
ဥပမာ မလိုအပ်ဘဲ စကားတွေအများကြီး ပြောနေတတ်တာမျိုး။
အချိန်တွေပိုနေလို့ဆိုပြီး ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ဘာမှန်းမသိ ထိုင်ကြည့်နေတာမျိုး။
လူသိများရင်ပြီးရောဆိုပြီး ရှိသမျှပွဲတွေ အတင်း လိုက်တက်နေတာမျိုး တွေ ကို လုပ်ချင်စိတ် လုံးဝ(လုံးဝ) ပျောက်လာတယ်။
ဘဝကို စိတ်ပျက်သွားတာ မဟုတ်ဘူး။
လက်ရှိအနေအထားကို (အမှန်တကယ်) ကျေနပ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ပုထုဇဉ်ပီပီ မရောင့်ရဲနိုင်သေးလို့ ဆက်ကြိုးစားတယ်။
ခန္ဓာရခြင်းဟာ ဒုက္ခအမှန်ဖြစ်ကြောင်း စတင်နားလည်စပြုလာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းမှုတွေဟာ အရင်ကထက် ပို အဆင်ပြေလာတယ်။
Posted in NOe, PeopleLeaveacomment
“Victim Blame မလုပ်ပါနဲ့” တဲ့ ။
ဘယ်သူက Victim လဲ? ဆိုတာ သက်သေနဲ့တကွ ကွဲကွဲပြားပြားမသိရသေးဘဲနဲ့ကို အဲလိုတွေအော်ကြတော့တာ။
Victim ဆိုတာ “မုဒိန်းကျင့်ခံရပါတယ်လို့ အော်နေတဲ့သူ ” လို့အဓိပ္ပာယ်မရဘူး။
ဘေးဒုက္ခရောက်သူ ” တွေကို Victim လို့ခေါ်တာ။
“မိန်းမသားတစ်ယောက်က ဘယ်နည်းနဲ့မှ သူ့အရှက် သူခွဲပြီး ဘလာဘလာဘလာ @&$$&&”?;;:”
အရှက်ရှိတယ်ဆိုတာ မိန်းမဖြစ်ခြင်း ၊ ယောက်ကျားဖြစ်ခြင်း နဲ့မဆိုင်ဘူး။
ဆင်းရဲခြင်း ၊ ချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး၊
ရုပ်ဆိုးတာ ၊ ရုပ်လှတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။
ပညာတတ်ခြင်း ၊ ဉာဏ်နည်းခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။
အရှက်တရားဆိုတာ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ခံယူချက် နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြုံတုန်းပြောရရင် မုဒိန်းကျင့်ခံ ရတာဟာ ရှက်စရာမဟုတ်ဘူး လို့ခံယူပါတယ်။
ဒီလိုပြောလို့ မုဒိန်း(တကယ်) ကျင့်ခံရသူတွေက Victim မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။
သူအလိုမတူတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို အဓမ္မအတင်းလုပ်ယူခံရတဲ့အတွက် ၊ သူဟာ အနိုင်ကျင့်ခံရသူဖြစ်တဲ့အတွက် သူဟာ Victim ပဲ။
ဒီအတွက် သူ့မှာ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း တရားစွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
ဒါပေမယ့် မုဒိန်းကျင့်ခံရခြင်းအတွက် သူ့ဘဝဟာ လမ်းမဆုံးသွားဘူး။
မုဒိန်းကျင့်ခံရတဲ့သူတွေကို သနားတာလည်း သူတို့အပြင်မရှိဘူး။
အေး …… ကိုယ့်တူ ၊ ကိုယ်သား ၊ ကိုယ့်မောင်ဘွား တစ်ယောက်ယောက်ကများ ဒီလို မုဒိန်းကျင့်ခံထားရဖူးတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို” မိသားဖသား ပီပီ တင့်တောင်းတင့်တယ် လက်ထပ်ပြီး ဇနီးမယားအဖြစ် သေတပန် သက်တစ်ဆုံး ပေါင်းသင်းချင်ပါတယ် ” လို့ဆိုလာရင် အကြောက်အကန်ကို ငြင်းကြတော့တာ။
ကမ္ဘာပျက်မတတ် ငြိုးရန်တွေ ဖွဲ့ကြတော့တာ။
မေးချင်တာက “သနားတယ်ဆိုတာ” ဘာကို သနားတာလဲ?
ကိုယ့်ထက် နိမ့်ကျသွားတယ်မှတ်ယူပြီး သနားတာလား?
အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ သူ့ဘဝကို တကယ်စာနာပြီးသနားတာလား?
တစ်ခုခုဆို” နှမချင်းမစာနာကြဘူး။ အမေချင်းမစာနာကြဘူး” နဲ့ ။
“အချိန်တန်ရင် သက်သေတွေက စကားပြောလိမ့်မယ်။”
မိမိမှာ ရခိုင်ဖြစ်ကြောင်း လူစိမ်းတွေကြား ပြောမိသောအခါ
မိမိမှာ ရခိုင်ဖြစ်ကြောင်း လူစိမ်းတွေကြား ပြောမိသောအခါ အမေးခံရလေ့ရှိသော မေးခွန်းများထဲမှ မိမိသဘောမတွေ့သည့်မေးခွန်းအချို့
– ရခိုင်ဖြစ်ပြီး ဘာလို့ အသားတွေ ဖြူနေရတာလဲ?
– ရခိုင်ဖြစ်ပြီး စကားလဲမဝဲဘူးကော။
– ရခိုင်ဆိုတော့ အစပ်ကြိုက်မှာပေါ့။
– ရခိုင်တွေက ဆီမစားဘူးနော်?
– ရခိုင် မုန့်တီချက်တတ်လား?
– ရခိုင်ဖြစ်ရင် အသားမဲ ရမယ်လို့ ဘယ်သူကများ သတ်မှတ်ခဲ့လဲ?
အသက် က၂၆၊ ရန်ကုန်မှာနေတာ ၂၄ နှစ်ရှိနေပြီရန်ကုန်လေသံပေါက်မှာပေါ့။
ရန်ကုန်ကလူတွေအချို့က ဗမာအချင်းချင်းကိုတောင် အညာသားတွေဆို စကားဝဲတယ်လုပ်ချင်ကြတာ။
– အစပ်ကြိုက်လားဆိုတော့ အစပ်လည်းကြိုက်တယ် ၊ အချိုလည်းကြိုက်တယ် ၊ အချဉ်လည်းကြိုက်တယ်၊ အငံလည်းကြိုက်တယ် ၊ အဖန်လည်းကြိုက်တယ် ၊ အခါးလည်းကြိုက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီကိုယ်လုံးဖြစ်နေတာ။ ဘယ့်နှယ် မသိရင် ရခိုင်တွေက ငရုပ်သီးတွေချည်း ထိုင်စားနေတဲ့ ပုံမျိုး။
– ဆီစားတာ ၊ မစားတာတော့ အများကြီးမရှင်းချင်ဘူး။
ဓညင်းသီးပြုတ်ကို ဗမာတွေ ငပိရည်နဲ့တွဲစားချိန်မှာ ရခိုင်တွေက ဆီခွက်ထဲ နှစ်နှစ်ပြီး သရေစာလိုစားတာပဲကြည့်တော့။
(သူ့ဓလေ့နဲ့သူ ဆီစားကြပုံကို ဥပမာပေးတာပါ။ ဗမာတွေကို စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးနော် ။ )
– မုန့်တီချက်တဲ့ ကိစ္စကတော့ ပြန်မေးချင်တာ ဗမာတိုင်းရော မုန့်ဟင်းခါးချက်တတ်ကြလို့လား?
ကရင်တိုင်းရော မျှစ်တာလပေါ ချက်တတ်ကြလား?
နောက်ပြီး ရခိုင်တိုင်းလည်း မုန့်တီမကြိုက်ဘူး။
ကိုယ်တွေဆို မုန့်တီထက် မုန့်ဟင်းခါး ပိုကြိုက်တယ်။
Posted in Gossip, NOe, PeopleLeaveacomment
အညာမှာပွင့်တဲ့ စိန်ပန်းနီ (သို့မဟုတ်) မင်းစုရွာက အညာသူလေး။
အသက်က ၁၂ နှစ်။
Workshop လာတက်တဲ့ သူ့အမေကို လာစောင့်ရင်း ကျောင်းဝန်းထဲက ကျောင်းစောင့်ဦးလေးကြီးနဲ့ ရယ်ရယ်မောမောစနောက်ဆော့နေတဲ့ကလေးမလေးပါ။
နိုးတို့ အအေးတွေ ၊ ရေသန့်ဘူးတွေလိုလာတော့လည်း သူ့စက်ဘီးပန်းရောင်လေးနဲ့ ပြေးပြေးဝယ်ပေးရှာတယ်။
“သမီးကအတန်းထဲမှာအဆင့်ဘယ်လောက်ရလဲ။”လို့သွေးတိုးစမ်းတော့ “သမီးက A နဲ့အောင်တာ”တဲ့လေ။
အခြား Trainer တွေရဲ့ Workshop အချိန်တွေမှာ
သူနဲ့နိုုးနဲ့ နှစ်ယောက်သား ကျောင်းဝန်းကြီးထဲ့ မန်းကျည်းကြီးအောက်မှာထိုင်လို့ စကားစမြည်နည်းနည်းပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
စကားပြောရင်းသိလာရတာက အဲဒီနေ့က သူ့မွေးနေ့ပါတဲ့။
“Happy Birthday ပါသမီးရယ်။”ဆိုတဲ့ဆုတောင်းစကားနဲ့ Ve Ve အချိုရည်တစ်ဗူးကလွဲလို့ နိုးမှာ သူ့အတွက်ထူးထူးခြားခြားပေးစရာလက်ဆောင်မရှိခဲ့ဘူး။
ကလေးမလေးကိုကြည့်ရတာ သွက်လက်ချက်ချာ ပျော်ရွှင်တက်ကြွနေတာပဲ။
Workshop ပြီးလို့ အားလုံးနှုတ်ဆက်ကြတော့မှကလေးမလေးရဲ့ အမေနဲ့စကားပြောဖြစ်ပြန်တယ်။
“အမ သမီးလေးက ချစ်စရာလေးနော်”လို့ဆိုတော့
“တစ်ဦးတည်းသော သမီးပါဆရာမလေးရယ်။ ကျွန်မက Nurse ပါ။သူ့အဖေကတော့ မီးရထားဝန်ထမ်းလေ။ ရှေ့လ ၁၁ ရက်နေ့ကမှဆုံးသွားတာ။နှစ်တိုင်းသူ့မွေးနေ့ဆို အိမ်မှာမုန့်ချက်ပြီးအရပ်ကိုဝေနေကျလေ။ဒီနှစ်ကျတော့ သူ့အဖေဆုံးတာ တစ်လတောင်မပြည့်သေးတော့ ဘာမှမလုပ်ပေးဖြစ်ဘူး။နောက်တစ်ပတ်ဆိုရန်ကုန်သွားပြီးသူ့အဖေ ပင်စင်ကိစ္စတွေသွားလုပ်ရမှာ။အိမ်မှာကလည်းလူခွဲမရှိတော့ သူ့ပါခေါ်သွားရတော့မယ်။”
ဘယ်လိုစကားနဲ့နှစ်သိမ့်ဖို့စကားရှာမရနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကလေးမလေးက ကိုယ့်ကို ပြံုးပြီးကြည့်နေရာကနေ သွားလေးတွေပေါ်အောင်ထိ ရယ်ပြလိုက်တော့ ကိုယ့်မှာဆွံအသွားရတယ်။
“အော် ကလေးရယ်။” အသံမထွက်အောင် ရေရွတ်မိခဲ့မယ်ထင်တယ်။
“အမရယ်။ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ရန်ကုန်ရောက်ခဲ့လို့ အကူအညီလိုတယ်ဆိုလည်းဆက်သွယ်ပါ”။
မင်းစုကနေ မြင်းခြံကိုခရီးဆက်ရဦးမှာမို့ ကားတံခါးကိုဆွဲဖွင့်တော့ အဖေအိမ်ပြန်နောက်ကျလို့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မွေးနေ့အမှတ်တရကျွေးဖို့ မုန့်တွေဝယ်ဖို့ အချိန်မမီတော့တဲ့အတွက် စိတ်ကောက်ပြီး ကျောင်းမသွားတော့တဲ့ ၁၃ နှစ်သား ငနိုးဟာ ကားပေါ်မှာငုတ်တုတ်။သူခေါင်းငုံ့နေတယ်။အသံတိတ်နေတယ်။ရှက်နေတယ်။
လတ်တလောအဖေတစ်ယောက်လုံးကိုဆုံးရှုံးထားလို့ မွေးနေ့မလုပ်ရတဲ့ ၁၂ နှစ်အရွယ် မွေးနေ့ရှင် အညာသူလေးက ကားပေါ်က နိုးကို ပြံုးပြံုးလေးကြည့်ပြီး လက်ပြနှုတ်ဆက်တယ်။
ငနိုးတစ်ယောက် ကလေးမကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ဖြစ်လားမဖြစ်လားတော့ ငနိုးကိုယ်တိုင်လည်း အခုထိ ဝေခွဲမရသေးပါ။
နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ဒီလိုပဲ ပွင့်လန်းကြစေချင်ပါတယ်။